Ọkụ MP4 ka DVD
1. tọghata MP4 ka DVD
2. Ọkụ MP4 ka DVD Player
3. tọghata MP4 ka iso
4. Mepụta DVD si MP4
5. Ọkụ MP4 ka DVD on Windows 8
6. Ọkụ MP4 na Windows DVD Onye kere
7. Ọkụ MP4 na iDVD
> Resource> DVD> MPEG4 burner: Olee otú iji tọghata MPEG4 ka DVD
MPEG4 (ie MPEG-4) A na-akọwa a ọkọlọtọ n'ihi compressing ọdịyo na video dijitalụ data. Ebe ọ bụ na ọ na-n'ọtụtụ ebe na, ị nwere ike mfe na-enweta oké ọtụtụ n'ime video faịlụ na koodu na MPEG4 ọkọlọtọ. Na a ga-adị mgbe gị mkpa iji tọghata gị MPEG4 faịlụ ka DVD discs maka playback on DVD Player, na-ekere òkè ọzọ conveniently, ma ọ bụ na-edebe ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụrụ otú ahụ, ihe dị mfe na-eji MPEG4 ka DVD Ntụgharị na-atụ aro.
Wondershare DVD Onye Okike (DVD Creator for Mac)-eme ka ọ ngwa ngwa na mfe ka ị ọkụ a ọkachamara-na-achọ DVD diski gị MPEG4 faịlụ. Unu dị họrọ a jụụ DVD menu template (ọtụtụ nke ndebiri nyere) hazie gị onwe gị DVD menu, na (nhọrọ) eji ya kemfe video edezi ngwaọrụ hazie gị videos. Ọzọkwa, i nwere ike tinye ndabere music, foto, na na. Dum usoro bụ nnọọ atọ mfe nzọụkwụ. Ugbu a, dị nnọọ hụ otú nke a smart MPEG4 ka DVD burner arụ ọrụ.
Cheta na: Ma DVD5 adn DVD9 diski dị ebe a.
1 mbubata gị MPEG4 videos a MPEG4 ka DVD Ntụgharị
Ị nwere atọ ụzọ dị iche iche mbubata gị MPEG4 faịlụ a usoro. Pịa-acha anụnụ anụnụ gburugburu bọtịnụ na n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke ya interface iji họrọ "Tinye Files" nhọrọ, ma ọ bụ see "+ Import" button na a na ngwa ekpe ebi ndụ iji mara gị lekwasịrị faịlụ. Ikpeazụ na otu onye bụ kpọmkwem ịdọrọ na dobe gị obodo MPEG4 faịlụ ka n'aka ekpe nke ngwa a.
Cheta na: The video usoro a na-eji ngwa ekpe ebi ndụ na-anọchite anya maka play iji. Ya mere, ị ghaghị ijide n'aka na playback iji bụ onye ị chọrọ. Ọ bụrụ na, dị nnọọ họrọ otu faịlụ wee pịa na "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala ịgbanwe ya. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye utu aha, dị nnọọ see "Tinye aha" button.
Atụmatụ: (Nhọrọ) Ọ bụrụ na ị kụrụ Dezie nhọrọ na otu nke video item Ogwe, ị ga-enwe nhọrọ dezie video, sịnụ, akuku, bugharia, mkpụbelata videos, tinye watermark ma ọ bụ sobtaitel wdg
2 Mee a DVD menu n'ihi na gị DVD
See NchNhr taabụ na a window. Mgbe ahụ, Bugharịa ihe mmịfe n'akụkụ aka nri na-agagharị na ndị a nyere DVD menu ndebiri ruo mgbe ị na-ahọrọ ọkacha mmasị gị otu template. Ugbu a, hazie gị onwe gị DVD menu a template site na-agbakwụnye thumbnail, ederede, buttons, n'okirikiri ma ọ bụ foto wdg (Cheta: Ị ga-enweta ihe free menu ndebiri bụrụ na ị pịa green ala akụ bọtịnụ.)
3 ịhụchalụ gị oru ngo na tọghata MPEG4 ka DVD
Mgbe e mere ihe nile, ị nwere ike ihuchalu dum oru ngo. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe afọ ojuju, ị dị nnọọ na-aga azụ ma na-eme ya ọzọ. Ọ bụrụ na ọ bụ ok, i nwere ike na-amalite DVD enwu site ọkụkụ "Ọkụ" taabụ.
Fanye a ide DVD diski, tinye akara "Ọkụ ka diski" nhọrọ, na mgbe ahụ na ala-nri akuku nke window, pịa apa ọkụ bọtịnụ. Ugbu a, a oké MPEG4 ka DVD burner ga-akpaghị aka rụọ ọrụ maka gị. Mgbe mgbe, i nwere ike ga a writen DVD diski.
Ọ bụrụ na ndị size dum DVD ngo bụ karịrị gị DVD nchekwa ikike, a ngwa ga-mpikota onu ya na-akpaghị aka.